Ciidamada Isbaheysiga ee Sacuudiga oo weerar ku dilay tobanaan Xuutiyiin ah | XORRIYA NEWS
Home Caalamka Ciidamada Isbaheysiga ee Sacuudiga oo weerar ku dilay tobanaan Xuutiyiin ah
Ciidamada Isbaheysiga ee Sacuudiga oo weerar ku dilay tobanaan Xuutiyiin ah
Isbaheysiga Sacuudiga uu hogaamiya ee ka dagaalama gudaha Yeman ayaa bilaabay howlgalo habeenkii ah oo lagu bar tilmaameed sanayay goobaha kooxda Xuutiyiinta ay ka deganyahiin caasimada Yemen ee Sanca.
Qaraxyo ayaa la maqlay ka dib markii qeybo ka mid ah Magaalada Ma’rib, lagu weeraray Gantaalo dhawr ah intii ay socdeen dagaalo halkaasi ay ku qadeen ciidamada isbaheysiga.
Ilo wareedya ayaa sheegaya in diyaaradaha dagaalka isbahaysiga ay beegsadeen xalay xilli dambe xerada Al Sawaad ee degmada Sanxaan oo ku taallo koonfurta magaalada Sanca.
Warbaahinta Yemen ayaa soo warisay in duqeyn kale oo cirka ah lala beegsaday beero ku yaalo aagga degaanka Saraf ee bariga Sanca, iyada oo aan la sheegin in duqeymahaasi ay ka dhasheen qasaaro.
Dhinaca kale ilo maxalli ah oo ku sugan magaalada Marib ayaa soo wariyay in qaraxyo dhawr ah laga maqlay kadib markii gantaal lagu garaacay gooba ay ku sugnayeen Xuutiyiinta, iyada oo gawaarida gurmadka degdegga ah ay wali ku sii qulqulayaan goobta ay ka dhaceen duqeymaha.
Ciidamada isbaheysiga ayaa sheegay in tiro ka badan 35 Xuutiyiin ah ay dileen kadib dagaal ka dhacday degaanka Al Jufra iyo buuraha Salab ee dhaca waqooyga galbeed ee Ma’rib.
Duqeeymahan oo ay fuliyeen Ciidamada isbahaysiga ee uu hogaanka u haya Sacuudiga ayaa imanaya maalmo kadib markii Xuutiyiinta ay ku dhawaaqeen inay diyaarado Drones ah ay u dirayaan garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Abha oo dhaca Koonfurta Sacuudiga, si ay halkaasi duqeeymo ugu geystaan.